Development Network for Immigrants ─ အရေးအကြီးဆုံးအချိန်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပါ! “ထိုင်ဝမ်၌ ကိုဗစ်-19 တိုက်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကွန်ရက်” ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
အရေးအကြီးဆုံးအချိန်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပါ! “ထိုင်ဝမ်၌ ကိုဗစ်-19 တိုက်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကွန်ရက်” ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
Date : 2020/6/16
Updated : 2020/6/16 下午 01:53:00
ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သေးခြင်းမရှိသော်လည်း ထိုင်ဝမ်အနေနှင့် ၎င်း၏ပြည်သူများအပေါ် ကပ်ရောဂါကျရောက်ခြင်းအား အနည်းနိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် ထိရောက်၊ လျှင်မြန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးစင်တာမှ ဇွန်လ7ရက်နေ့တွင် ကြေငြာခဲဲ့သည်။ ဤကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း အတွေ့အကြုံကို မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေး ဝန်ကြီးဌာန (MOHW) မှ ဗဟိုနှင့် ဒေသတွင်း အစိုးရ၏ အမျိုးမျိုးသော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး မူဝါဒများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော ဖြစ်စဉ်များကို အထူးပေါင်းစပ်၍ ဤ “ထိုင်ဝမ်ပုံစံ” ကိုအချိန်ဇယားအတိုင်း ပြသခဲ့သည်။ ဤမှတ်တမ်းမှ ထိုင်ဝမ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အောင်မြင်မှုများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အခြေခံ၊ အရေးပါသောမူဝါဒများ စသည့် ပါဝင်သောအချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသည်တွင် ကဏ္ဍအားလုံးမှ ထိုင်ဝမ်၏ ပြည်သူကျန်းမာရေးအားသာချက်ကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်မှအကူအညီပေးနိုင်သည်၊ ထိုင်ဝမ်မှကူညီနေသည်ကို သက်သေပြနေပါသည်။
“ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော အချိန်ဇယား”၊ “အောင်မြင်သော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပါဝင်ချက်များ”၊ “ထိုင်ဝမ်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးစနစ် အခြေခံ”၊ နှင့် “အရေးကြီးသောမူဝါဒများ” အသီးသီးပါဝင်သော “ထိုင်ဝမ်၌ ကိုဗစ်-19 တိုက်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကွန်ရက်” ကို တရုတ်ဘာသာဖြင့်သာမက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပါတင်ဆက်ထားကြောင်း ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးစင်တာမှ ထောက်ပြခဲ့သည်။
1.	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော အချိန်ဇယား - ထိုင်ဝမ်နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သောလူနာ အရေအတွက် စုစုပေါင်းကိုပြပြီး ထိုင်ဝမ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ရည်ညွှန်းရန် ထိုင်ဝမ်၌ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေး အချိန်အမှတ်အသားအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်သည်။
2.	အောင်မြင်သော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပါဝင်ချက်များ - “ဆားရောဂါအတွေ့အကြံု”၊ “ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးစင်တာ”၊ “ကွယ်ဝှက်ထားခြင်းမရှိသော သတင်းအချက်အလက်”၊ “သင့်လျော်သော အရင်းအမြစ်နေရာချထားမှု”၊ “အချိန်မှန် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ခြင်း”၊ “ခေတ်ဆန်သော လူထုကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း”၊ “ခေတ်ရှေ့ပြေးသော ဆေးဘက်နည်းပညာ”၊ “အတွေ့အကြံုရှိသော နိုင်ငံသားများ” နှင့်အခြား စသည့် ပါဝင်ချက် အသီးသီးရှစ်ခုကို ပုံများနှင့် ထပ်တူကျသည့် ရိုးရှင်းသော၊ အစီအစဉ်ချထားသော နောက်ခံစကားပြောနည်းလမ်းနှင့် အကျဉ်းချုံးဖော်ပြချက်များနှင့်တကွ အတိုချုပ် ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး အောင်မြင်မှုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရာတွင် ဗဟိုနှင့် ဒေသတွင်း အစိုးရတို့ အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သလို အတွေ့အကြံုရှိသော နိုင်ငံသားများ၏ ပူးတွဲအားထုတ်မှုလဲလိုအပ်ပါသည်။
3.	ထိုင်ဝမ်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးစနစ် အခြေခံ - ထိုင်ဝမ်အနေနှင့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ထိရောက်လျှင်မြန်သော စီမံကိန်းများချမှတ်နိုင်ရန် လွန်စွာကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ထူထောင်ရန်အတွက် ဆေးဘက်နှင့်ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများတွင် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
4.	အရေးကြီးသောမူဝါဒများ - ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဖြစ်စဉ်များအပေါ် အရေးကြီးမူဝါဒ တစ်ခုခြင်းစီ၏ အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိလိုပါက လည်ပတ်သူများအနေနှင့် (https://covid19.mohw.gov.tw) ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် “ထိုင်ဝမ်၌ ကိုဗစ်-19 တိုက်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်ကွန်ရက်” ကိုရှုနိုင်ပြီး မှတ်ချတ်များလည်းပေးခဲ့နိုင်ပါသည်။